तपाईंको हातमा मोबाइल छ? अब पैसा बोक्नुपर्दैन
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असार २६
तपाईं नेपाल टेलिकमको मोबाइल बोक्दै हुनुहुन्छ भने अब खल्तीमा पैसा नराखे पनि फरक पर्दैन।
बजारमा कुनै सामान किन्न, रेस्टुरेन्टमा खान वा कुनै सेवा उपभोग गर्न मन लागे तपाईं आफ्नो मोबाइलबाटै पैसा तिर्न सक्नुहुनेछ।
नेपाल टेलिकमले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मोबाइलबाटै पैसा तिर्न मिल्ने ‘मोबाइल मनी’ सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट पैसा तिर्न सकिने व्यवस्थासहितको कानुन ल्याएपछि टेलिकम आफ्ना उपभोक्तालाई यस्तो सेवा दिने तयारीमा लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले उक्त कानुन ल्याइसकेपछि तीनवटा कम्पनीले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको पैसा तिर्ने अनुमति पाएका छन्। स्रोतका अनुसार ती कम्पनीले टेलिकमसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रस्तावक कम्पनीहरू आइएमई पे, प्रभु टेक्नोलोजी र सिजी पे हुन्। तीनैवटा कम्पनीले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको टेलिकम स्रोत बताउँछ।
विद्युतीय भुक्तानीको निम्ति रणनीतिक साझेदारीका लागि आएका प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न टेलिकम सञ्चालक समितिले समिति गठन गरेको थियो।समितिले कुन मोडालिटीमा जाने, कसरी जाने, व्यावसायिक साझेदारी नै गर्ने कि माध्यम मात्र प्रयोग गर्ने लगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
स्रोतका अनुसार अध्ययन समितिले टेलिकम सञ्चालक समितिलाई दुईवटा विकल्प दिएको छ। पहिलो, यिनै तीनवटा प्रस्तावक कम्पनीमध्ये कुनै एउटासँग रणनीतिक साझेदारी गरी अघि बढ्ने। दोस्रो, टेलिकम आफैंले नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरेर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने।
टेलिकम अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मोबाइल भुक्तानीको विषय अध्ययनमा रहेको बताए।
‘मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु गर्न कुन विकल्पमा जाने भन्ने छलफलकै क्रममा छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘जुन निर्णय गर्दा टेलिकमको हित हुन्छ, बोर्डले त्यही निर्णय लिनेछ।’
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भने ‘अन्य कम्पनीसँग व्यावासायिक साझेदारीमा जाने कि टेलिकमले आफैं यो सेवामा हात हाल्ने’ बारे छलफल भइरहेको बताइन्। ‘अध्ययन भइरहेको छ, केही समयपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ,’ उनले भनिन्।
आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतम सुमन पोखरेल मोबाइलबाट भुक्तानी गर्न दूरसञ्चार च्यानल (युएसएसडी गेटवे) आवश्यक पर्ने हुँदा टेलिकमसँग रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गरेको बताउँछन्।
मोबाइल एप्लिकेसन र वेबबाट मात्र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी असम्भव भएकाले टेलिकमसँग साझेदारीको प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो साझेदारीबापत राजस्व बाँडफाँड गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने।
टेलिकमले भने यी कम्पनीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नुको साटो आफैं सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्रोतले बतायो।
‘१ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहक भएको टेलिकम आफैंले सहायक कम्पनी बनाएर जाँदा व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना बढी छ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवसर हुँदाहुँदै अरूसँग साझेदारी किन गर्ने?’
मोबाइल मनी सेवा के हो?
वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मोबाइल फोनका माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई मोबाइल भुक्तानी वा मोबाइल मनी भनिन्छ। सन् १९९७ बाट सुरु भएको यो प्रविधि विभिन्न देशमा विभिन्न मोडलमा सञ्चालन भइरहेको छ।
यो सेवाअन्तर्गत मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्स रकमबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि एसएमएस वा कार्डको माध्यम प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
जस्तो, कुनै पसलमा गएर ५० रुपैयाँको स्याउ किन्दा दोकानदारको मोबाइल नम्बरमा ग्राहकले एसएमएसबाट ५० रुपैयाँ पठाइदिनसक्छ। यो मोबाइल मनीको सबभन्दा सजिलो उपाय हो। अर्को, मोबाइलको डाटा प्रयोग गरेर सम्बन्धित बैंकमा रहेको खाताबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
अफ्रिकाका केही देशमा निकै सफल मानिएको यो प्राविधि युरोप, अमेरिकामा पनि प्रचलित छ। दक्षिण एसियामा बंगलादेशमा यो लोकप्रिय छ।
नेपालमा भने बैंकमा गएर खाता खोल्ने वा तोकिएको एजेन्टकहाँ गएर पैसा जम्मा गरी मोबाइलबाट गरिने भुक्तानीलाई मोबाइल मनीका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ।
टेलिकमले आइएमई पेसँग साझेदारी गर्ने हो भने आइएमई एजेन्ट वा बैंक खातामा रहेको रकमबाट भुक्तानी गरिन्छ। भुक्तानी गर्दा इन्टरनेट भएको ठाउँमा एप्लिकेसन वा वेबबाट गरिन्छ भने अन्यत्र एसएमएसमार्फत् गर्न सकिने आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २६, २०७४, ०७:२४:१९